Izindaba - Amanothi womzila wegesi ophelele
1. Mayelana nezinhlobo zoketshezi
Ukusetshenziswa koketshezi ukusebenzisa umoya ocindezelweyo, ukusetshenziswa kolunye uketshezi lomcimbi kufanele kuqinisekiswe yinkampani.
2. Ukujiya kwesimo samanzi
Umoya ocindezelweyo ngamanzi afingqiwe kuzoba imbangela yokungasebenzi kahle kwezingxenye zomoya. Ngaphambi kwesihlungi, ama-air dryers, izingibe ze-condensate kufanele zifakwe.
3. Ukulawula ukufudumeza amanzi ngokujiya
Lapho i-condensate ikhohliwe ukukhipha isihlungi somoya, i-condensate izophuma ohlangothini olubili, idale ukungasebenzi kahle kwezingxenye zomoya. Ukuphathwa kokukhishwa kwe-Condensate kunezikhathi ezinzima, kunconywa ukusebenzisa isihlungi ngemisele ezenzakalelayo.
4. Mayelana nezinhlobo zomoya
Umoya ocindezelweyo oqukethe amakhemikhali, uwoyela wokwenziwa oqukethe izinyibilikisi eziphilayo, usawoti, amagesi abhubhisayo, njll., Uzoba imbangela yokubhujiswa nezenzo ezimbi, okungafanele kusetshenziswe.
5. Isihlungi somoya kufanele sifakwe
Eduze nohlangothi olusenyakatho lwe-valve, isihlungi kufanele sifakelwe ukunemba kuka-5µ m kulandela isihlungi somoya.
6. Ngemuva kokusetha i-cooler, i-air dryer kanye ne-condenser water collector, njll.
Umoya ocindezelwe oqukethe inani elikhulu lamanzi afingqiwe, kuzoholela ku-valve nakwezinye izingxenye zomoya zokwenza okubi, ngakho-ke uhlelo lomthombo wegesi kufanele lubekwe ngemuva kwe-cooler, air dryer kanye nomqoqi wamanzi opholile, njll.
7. I-Toner nezikhathi ezengeziwe ohlangothini olukhuphukayo lwe-valve, kufanele zisethe isihlukanisi senkungu kawoyela
Lapho i-toner eyenziwe yi-air compressor, enamathiselwe ku-valve, i-valve izodala isenzo esibi.
Izidingo eziningiliziwe zekhwalithi yomoya ocindezelweyo, bheka inkampani "icindezelwe uhlelo lokuhlanzwa komoya".
8. Ukukhishwa kwamanzi okujiyile
Amanzi afingqiwe kusihlungi somoya kufanele akhishwe njalo.
Ukunwebeka kokuvala uphawu kwe-solenoid valve, lapho uwoyela, uwoyela kufanele uqhubeke.
I-Turbine No. 1 (akukho okufakiwe) i-VG32 ISO kufanele isetshenziswe. Ngaphezu kukawoyela othambisa umzimba, kuzobangela ukungasebenzi kahle kwe-valve, njll.
10. Ukulahlwa kwepayipi
Ukudonsa ngaphambi kokusika okuphelele noma okugeziwe kwepayipi lokusika, ukusika uwoyela noma uthuli njll.
11.Indlela yokubopha uphawu lwe-tape
Ukuhlanganiswa kwepayipi nepayipi kuyisikhathi sokuxhumeka okuhlanganisiwe, ungavumeli intambo enhle yepayipi le-powder nokubekwa uphawu kwebhande lemfucumfucu exutshwe nepayipi langaphakathi. Lapho kusetshenziswa itheyiphu yokufaka uphawu, ukuphela kwangaphambilini kwentambo yesikulufa kufanele kubekwe eceleni ngezinhlamvu ezi-1 zomucu hhayi ukusonga itheyiphu yokufaka uphawu.
12. Musa ukusebenzisa amagesi abhubhisayo, amakhemikhali, amanzi, amanzi, imvelo yomhwamuko wamanzi noma izindawo ezinezinto ezingenhla.
13. Vikela isakhiwo esihambisana ne-IP65 ne-IP67 (ngokuya ngemikhiqizo ye-IEC60529), (uthuli namanzi) othulini namanzi kungavikelwa. Kepha ayikwazi ukusetshenziswa emanzini, kufanele inake.
14. Okuhambisana nemikhiqizo ye-IP65 ne-IP67, ukufakwa kufanele kube kufanelekile ukuhlangabezana nemininingwane yabo, kubalulekile ukufunda amanothi womkhiqizo ngamunye.
15. Igesi evuthayo, umoya wegesi oqhumayo, ungayisebenzisi, ukuze ugweme ukuvela komlilo nokuqhuma. Lo mkhiqizo awunaso isakhiwo sokuqhuma esiphikisayo.
16. Ungasebenzisi endaweni yokudlidliza nokwethuka.
17. Indawo yokuchayeka elangeni, kufanele ingeze ikhava evikelayo, imboze ilanga.
18. Kunezindawo ezungeze umthombo wokushisa, imisebe yokushisa kufanele ime.
19. Lapho kukhona uwoyela noma izinhlansi zokushisela nezinye izindawo zokunamathisela, kufanele kuthathwe izinyathelo ezifanele zokuvikela.
20. I-valve ye-Solenoid efakwe kwikhabethe yokulawula, isikhathi eside emandleni esenzakalo, kufanele ithathe izinyathelo zokushisa ukuqinisekisa ukuthi i-solenoid valve ebangeni lokushisa livunyelwe.
21 Ukugcinwa kanye nokuhlolwa kuzokwenziwa ngokulandela izinqubo zebhukwana lokufundisa.
Uma isetshenzisiwe, izodala ukulimala, ukulimala, noma ukulimala kubasebenzi.
22. Izakhi zomoya othululwayo nocindezelwe kuqeda
Esiqinisekisweni sokushayela into yenziwa ukuvimbela ukulahla kokuwa nokuvimbela ukulahlwa kwababaleki, ukunqunywa kokuphakelwa kwegesi nokunikezwa kwamandla, uhlelo lwe-pneumatic izinsalela zangaphakathi zomoya ocindezelweyo ngokusebenzisa inqubo yokukhishwa kwengcindezi eseleyo ibilahla, ukuze ethula izingxenye. Ngaphezu kwalokho, ezintathu phakathi kophawu noma i-valve yohlobo lokulengiswa, i-valve kanye nesilinda phakathi komoya osele ocindezelweyo nakho kufanele kuthululwe.
Ngemuva kokufakwa noma ukufakwa kabusha kwezingxenye, owokuqala ukuqinisekisa i-actuator yomoya nokunye kwenziwe ukuvimbela ukulahlwa okusheshayo kokulahlwa, bese kuqinisekiswa ukusebenza okujwayelekile kwezingxenye.
23. Ukusetshenziswa kwemvamisa ephansi
Ukuze uvimbele ukunyakaza kwe-valve kubi, i-valve kufanele ibe sezinsukwini ezingama-30 ukwenza isenzo sokushintsha kanye, sicela unake ikhwalithi yokuphakelwa komoya.
24. Ukusebenza ngesandla
Ngokusebenza ngesandla, idivayisi kufanele ixhunywe esenzweni, bese iqinisekisa ukusebenza okuphephile.